Arimo Kaa Fogeyn Kara Lamaantaada Cusub Xiliga Jaceylka Bilowga Yahay (Halkaan Ka Baro Qodobo Xasaasi Ah) - iftineducation.com
iftineducation.com – Ragga badan ayaa inta ay is leeyihin haweeneyda soo jiita ayay waxa ay ku dhaqaaqayaan talaabooyin la yaab ah taasi oo haweeneyda ku qasbeysa in kumanaan Mayl ka fogaato ninka, waxa uuna gubtanews ku sheegayaa dhowr arin oo haweenka madax wareer ka qaadaan.
1-Xariirka Badan: in aad wicitaan badan ku sameyso haweeneyda aad jeceshahay waxaad ku weyneysaa ixtiraamkii ay kuu haysay , waxa ayna ku qasbeysaa xitaa in ay wayso in ay ku soo hiloowdo , waxaa ninyahoow aan xariifka aheyn kuula gudboon in xariiro kooban la sameyso .
2-Ninka Ku Hor Ooya Haweeneyda: waxaa hubaal ah in haweeneyda jeceshahay ninka dareemaha naxarista leh balse ka digtonaaw niyahow in aad ahaato nin jil jleeca ka batay si aysan haweeneyda u seegin fahamki ninka ay ka qabtay , ogaaw haweenka waxa ay si weyn uga helaan ninka xoogan oo u dulqaadan kara culeysyada .
3-Ninka dadka hortooda ku buun buuniya dareemihiisa: haweeneyda waa ay jeceshahay in meel waliba ugu muujiso jaceylka aad u qabto balse waa hab ixtiraam uu ku jiro ogaaw kama hesho mid ka bad badis ah taasi oo dadka kale ka xishoosineysa .
5-Ninka wax waliba haweeneyda adiga dooro dhaha: waxaa muhiim ah in xaaskada wax yaabaha qaar uga tagato in iyada doorato waxana muhiim ah in ay dareento in aad garab taagan tahay ra`yigaadana siiso balse ma ficna in wax waliba tirahdo sameey adiga doro waxi kula haboon .